Blog Aha Echiche: Atụmatụ Iji Họrọ Zuru okè Aha N'ihi na gị Blog
Ịkpọ blog nwere ike ịbụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, wwere ike iji ọtụtụ awa na-atụgharị uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke crappy.
1 ND # MỌD # 1: Ghọta otu aha gị si na-anọchite ika gị na Blog
2 Ntuziaka # 2: Tezaurul de Nwee este un nou și nu este bine!
3 Ntuziaka # 3: Jiri Nouns, Verbs, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
ND # MỌD # 1: Ghọta otu aha gị si na-anọchite ika gị na Blog
Tupu oricare arịgoo iwepụ aha ndị na-ede aha nchịkọta, ọ dị mkpa iwepụ oge ma ghọta ihe blog-ul aha aha gị na-anọchite anya ya.
Kedu ihe blog-ul gị ga-abụ?
Aha blog gị kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. Eram deja nați un blog nke a na-akpọ "Colțul Foodie" ma ọdịnaya gị bụ maka ịtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, ị ga – eme ka ndị na – agụgụ ihe na –
N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịnere aha ụlọ ọrụ / nke dị jụụ ma dee ya n’olu ụda olu, ọ na-enye onye na-agụ ya ihe na-ezighị ezi wee hapụ ha ka ha eche ma camb kwesịrị iji gị kpọrọ ihe ma ọ bụ na ha ekwesịghị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ blog malite nri, ị ga-eji okwu ndị metụtara nri ma ọ bụ iri nri (ya bụ, snacking, vegan, sănătos, chomping, wdg).
Blog bụrụ na blog gị banyere usoro azụmahịa, ị na-eji isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ jiri okwu nkwekọrịta (d SEOka SEO, ahịa dijitalụ, SEM wdg).
Ntuziaka # 2: Tezaurul de Nwee este un nou și nu este bine!
N’oge a, ị ga-enwe echiche nke okwu ndị kachasị mma ịkọwapụtara na blog gị. Ugbu a na-abịa ebe egwuregwu ahụ! Buru aisaurus, ma obu buru ibu thesaurus.com, na lelee okwu ndị yiri ya nke a wke ike makji aha blog gị.
Ka anyị kwuo na ị na-eme blọọgụ nri. W nwere ike ikpebi na ọtụtụ ọdịnaya gị ga-abụ isiokwu ndị na-esonụ: Nri, nri siri ike, vegan, mmega ahụ, obi ụtọ, ntụziaka, na ihe oriri.
Tinye okwu ndị ahụ n’ime thesaurus.com na ị ga-enweta okwu ndị dị ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, bunătăți, nri, munchies, ike, obi, veggies, na obi ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (dị ka vegan munchies sau Kwado nri nri) na voila, w n-am fost aha maka blog gị.
Mgbe ị nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog, wwke ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa maka ndepụta okwu.
Ntuziaka # 3: Jiri Nouns, Verbs, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
Ị nerew ike ikpebi na iji tezaur ahụ zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na ọkwa ọzọ, malite na-agbakwụnye mkpụrụ okwu, okwu verbs na / ma ọ bụ nkọwa.
Ntinye ederede, verbe, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. Ọzọ, ọ na-enyere aka izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Site na nchịkọta ihe oriri, wwere ike itinye okwu okwu ma ọ bụ nkọwa ndị na-adabere na gị dịka blogger, nke nkeere ike ụbụ: onyeisi, black okorobịa, black agbọghọ, onye mbido, nd, ndụm , nri ehihie, ụlọ ọrụ, wdg
Debe ha ọnụ na ị ga-enweta ihe bara nnukwu uru dị ka nri ụmụaka kwesịrị ekwesị, vegan șefu munchies, ntụ ọka kichin ọhụrụ, ma ọ bụ ụlọ oriri na-edozi ahụ.
I nwedịrị ike ime ya ka ọ gbakwunye ma gbakwunye ihe ngwa ngwa ma ọ bụ okwu dịgasị iche iche ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ụfọdụ ihe atụ ga-abụ: ntụziaka black agbọghọ kwesịrị ekwesị, na-eri nri nri noge nri, ndị na-aṅụrị ọṅụ, dị mma ma dị ọhụrụ.
Maka nu a fost mmasị, wwere ike ịnwale ịmepụta ma ọ bụ mepụta okwu ọhụrụ ọ bụla ị ga-akpọ aha gị na blog gị.
Nke a na-achọ ntakịrị ihe na-eche echiche na-abụghị nke na-eche echiche ma ọ bụrụ na ime-elu nkeere keghọ ụzọ dị egwu iji gbakwunye egwu na aha aha gị. Ufodu ihe omuma atu bu snackzilla, ih ozo, sizzlerella, ahuike.
Atụla egwu ịnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. Wwere ike imeri aha dị mma nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chere!
saịtị dị ka Wordroid.com bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji na-ejikọ ọnụ na okwu ọchị ma ọ dị mfe ime. Naanị tinye okwu nke metụtara ọdịnaya gị, pịa bọtịnụ "wordoids", ọ ga-enye gị ndepụta aha ndị ị nere ike iji.
Ie dị ukwuu banyere Wordroids bụ na ịwke ike ịtọ ókè gị na okwu gị, kọwaa àgwà nke okwu ahụ, setịpụ ụkpụrụ ya, na ọbụna gụnyere ngalaba aha nnweta. Nke a pụtara na ịwere ike ịchọpụta ma aha ịchọrọ ịdenyere aha na .com ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ewepụta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e were ya.
Cheta, enweghi iwu ndi siri ike mgbe abia ime aha. Ọ bụrụhaala na ị hụ na ọ na-ejikọta ọdịnaya gị, wwere ike ịbụ ihe okike dị ka ịchọrọ!